श्रीलंका विरुद्धको ‘वान डे सिरिज’ दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीलंका विरुद्धको ‘वान डे सिरिज’ दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो
काठमाडौं, चैत ३ । श्रीलंकाविरुद्धको पाँच खेलको एकदिवसीय सिरिज दक्षिण अफ्रिकाले ५–० ले जितेको छ । शनिबार राती भएको अन्तिम खेलमा डकवर्थ लेविस (डिएल) पद्दतिका आधारमा ४१ रनले विजयी भएसँगै श्रीलंका विरुद्धको सिरिज अफ्रिकाले जितेको हो ।
श्रीलंकाले दिएको २२६ रनको लक्ष्य पक्ष्याउने क्रममा १३५ रन बनाउन २ विकेट गुमाउँदा खराब फ्लडलाइटका कारण खेल रोकिन पुगेको थियो । अफ्रिकाको जितका लागि एडेन मार्करामले नटआउट ६७, रस्सी भान डर डुसेनले अविजीत २८, फाफ डुप्लेसीले २४ र क्विन्टन डी ककले ६ रन बनाए । बलिङंमा श्रीलंकाका लाथिस मलिङ्गा र थिसेरा परेराले एकएक विकेट लिए ।
याे पनि पढ्नुस ‘सुपर ओभर’ मा द. अफ्रिकासँग श्रीलंका पराजित
यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको श्रीलंकाले ४९.३ ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै २२५ रन बनायो । उसका लागि कुसल मेन्डीसले ५६, प्रिमिअल पेरिराले ३३, एन्जेलो पेरेराले ३१, इसुरु उडानाले ३२, ओसाडा फर्नाडोले २२ र धनन्जय डी सिल्भाले १२ रन बनाए । बलिङमा अफ्रिकाका कागिसो रबाडाले ३, इमरान ताहिर, एनरोच नोर्टजले २–२, लुंगी एन्गीडी र फेलकवायोले १–१ विकेट लिए ।
याे पनि पढ्नुस वान डे सिरिजः अफ्रिका र श्रीलंका भिड्दै, को–कोले पाए मौका?
ट्याग्स: Sri Lanka Vs South Africa